Golis oo qayb muhiim ah ka qaadatay tartankii Qur’aanka ee gobaladda Puntland | Golis Telecom Somalia
Golis oo qayb muhiim ah ka qaadatay tartankii Qur’aanka ee gobaladda Puntland
Maalintii jimcihii ayaa magaalada Garowe lagu soo gabgabeeyay tartankii quraanka Kariimka ee guud ahaan gobaladda Puntland kaas oo qabsoomidiisa ay shirkadda Golis ku lahayd kaalin muuqata oo lagu amaanay, waxana ka qayb galay munaasabadii soo xiritaanka tartankan qiimaha badan madaxwaynaha dawladda Puntland Dr C.wali Maxamed Cali Gaas.
Munsaasbada oo ka dhacday misaajidka Huda ee ku yaala caasimadda Puntland ee Garowe ayaa waxaa soo buux dhaafiyay dadwayne farabadan oo doonayay inay arkaan hanaanka loo maamuuso ardayda kaalmaha hore ka gashay tartanka Qur’aanka ee gobaladda Puntland. Shirkadda Golis oo qaadatay doorka maalgalinta ayaa ku bixisay qabsoomida tartanka iyo dhiirigalinta ardayda kaalmaha hore gashay lacag gaaraysa $8,000 (sideed kun oo dollar) oo ay ugu talagashay inay uga qayb qaadato tartankan socday bisha barakaysan ee Ramadaan kaas oo lagu tartamayay qawlka Eebe ee Qur’aanka Kariimka ah.
Madaxwayne C.wali Maxamed Cali Gaas oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey munaasabadda waxaa uu culimada iyo cidkasta oo ka qeyb-qaadatay hirgelinta Tartanka Qur’aanka kariimka ah ku dhiirigeliyey in ay sii laba jibaaraan , waxaana uu waalidiinta dhashay ardaydii ka qeyb-
gashay tartanka ku bogaadiyey sida wanaagsan ee ay u badkooda u tarbiyadeeyeen.
Munaasbaada xiritaanka ee tartankan waxaa uga qayb galay shirkadda Golis Hogaanka Xaaji Mire oo ah hogaanka xiriirka dadwaynaha qancinta macaamiisha iyo amniga ee Shirkadda Golis kaas oo kalmad uu goobta ka
jeediyay kaga warbixiyay doorka muhiimka ah ee ay shirkaddu ka qaadatay tartankan iyo tartamada kale ee la qabto bisha barakaysan ee Ramadaan isagoo xusay inaysan shirkaddu ka daalayn barnaamijyada noocan ah ee bulshada loogu garab istaagayo dhanka khayrka.
Ugu dambayn waxaa abaalmarino iyo lacago dhiirigalin ah lagu gudoonsiiyay madasha ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka Qur’aanka Kariimka ah ee gobaladda Puntland kuwaas oo qaar kamid ah uu gudoonsiiyay
madaxwaynaha Puntland Dr: C,wali Maxamed Cali Gaas.